တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း ပထမအသုတ် လာအိုနိုင်ငံသား ရထားယာဉ်မောင်းများအား ခန့်အပ် - Xinhua News Agency
တရုတ်-လာအိုရထားလမ်း ဗီယင်ကျန်းမြို့ တောင်ဘက်ဘူတာကြီး၌ လာအိုနိုင်ငံသင်တန်းသားများ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးနေသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဗီယင်ကျန်း၊ ဇွန် ၂၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်-လာအိုရထားလမ်းအတွက် လာအိုနိုင်ငံသား တွဲဖက်ရထားယာဉ်မောင်းရွေးချယ်ရေး စာမေးပွဲကို ဇွန် ၁၈ ရက် တွင် ကျင်းပပြီးဆုံးခဲ့ရာ လာအိုနိုင်ငံသား သင်တန်းသား (၆၆) ဦးစလုံး စာမေးပွဲအောင်မြင်၍ တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း ပထမအသုတ် လာအိုနိုင်ငံသား မီးရထားယာဉ်မောင်းများအဖြစ် တရားဝင်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလလယ်ပိုင်း တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းဖွင့်လှစ်လည်ပတ်ပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ တရုတ်-လာအိုရထားလမ်း ဗီယင်ကျန်း ယာဉ်စက်ပစ္စည်း လည်ပတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ်ရုံတွင် သက်ဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အဖွဲ့အစည်းများ တည်ဆောက်ရန် အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်-လာအိုရထားလမ်း လာအိုလမ်းအပိုင်းလည်ပတ်ရေးတာဝန်ခံကုမ္ပဏီ လာအို-တရုတ် ရထားလမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ မိတ်ဆက်ပြောကြားချက်များအရ သိရသည်။
တရုတ်-လာအိုရထားလမ်း ဗီယင်ကျန်းမြို့ တောင်ဘက်ဘူတာကြီး၌ သင်တန်းတက်ရောက်နေသူများကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
သီအိုရီသဘောတရားဗဟုသုတအပိုင်း မွမ်းမံသင်တန်းများနှင့် တစ်ဦးချင်း ယာဉ်မောင်းလက်တွေ့ဆင်းခြင်းများဖြင့် သင်တန်းသားများအား သက်ဆိုင်ရာ သဘာတရား သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့ယာဉ်မောင်းနှင်ရေး အလုပ်အတွေ့အကြုံများကို စုစည်းပေးခဲ့သည်။ နှစ်ဝက်ကြာ စွမ်းရည်အားဖြည့်မွမ်းမံသင်တန်းအပြီးတွင် လာအိုနိုင်ငံသား သင်တန်းသားအားလုံး သီအိုရီနှင့်လက်တွေ့အရည်အချင်းစိစစ်မှုကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ သူတို့အနေဖြင့် ကျည်ဆန်ရထား၊ ခရီးသည်တင်-ကုန်တင်ရထား၊ စက်ခေါင်းပြောင်းလဲချိတ်ဆက်မောင်းနှင်မှုလုပ်ငန်းများကို အသီးသီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရာတွင် ပျမ်းမျှမောင်းနှင်မှု ခရီး စုစုပေါင်းကီလိုမီတာ ၁ သောင်းကျော် ရှိခဲ့သည်။
တရုတ်-လာအိုရထားလမ်း ဗီယင်ကျန်းမြို့ တောင်ဘက်ဘူတာကြီး၌ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လေ့ကျင့်နေသူများကို ဇွန် ၁၄ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်-လာအိုရထားလမ်း ဗီယင်ကျန်းမြို့ တောင်ဘက်ဘူတာကြီး၌ ရထားစက်ပစ္စည်းစစ်ဆေးမှုစာမေးပွဲကျင်းပနေသည်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန် ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
လာအို-တရုတ် ရထားလမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ မိတ်ဆက်ပြောကြားချက်အရ လာအိုနိုင်ငံသား တွဲဖက်ရထားယာဉ်မောင်း ၆၆ ဦးသည် တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း လာအိုနိုင်ငံအပိုင်း ရထား၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမည်ဖြစ်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသား၊ လာအိုနိုင်ငံသား ယာဉ်မောင်း နှစ်ဦး ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းခြင်းကို ပုံမှန်အနေအထားဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်တွင် လာအိုနိုင်ငံသားရထားဝန်ထမ်းအဖွဲ့က သီးသန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
2022-06-19 18:31:53 分类： 政治法律
1. 2021年12月25日，老挝学员在中老铁路万象南站合影。 新华社发（王恩岭摄）
2. 2021年12月12日，老挝学员在中老铁路万象南站参加课堂教学。 新华社发（彭祥摄）
3. 2022年6月14日，老挝学员在中老铁路万象南站进行考前练习。 新华社发（杨永全摄）
4. 2022年6月14日，老挝学员在中老铁路万象南站进行考前练习。 新华社发（杨永全摄）